I-Debian Wheezy + KDE 4.8.x: Ukufaka nokwenza ngezifiso | Kusuka kuLinux
Esikhathini esithile esedlule ngishicilele udaba olukhombisa ukuthi kanjani faka futhi ulungiselele I-KDE 4.6 ekuhlolweni kwe-Debian, nale engiyibhala ngezansi, iyafana, kepha iqukethe izibuyekezo ngoba kunamaphakeji angasekho noma anelinye igama.
Namuhla ekuseni ngenze ukufaka okuhlanzekile (kusuka ekuqaleni) kwe Debian, ukubhala kangcono amaphakheji engiwadingayo ukuwafaka njalo njalo, ngakho-ke uma ulandela lesi sihloko igxathu negxathu, ngeke ube nesizathu sokuba nezinkinga.
1 Ukufakwa kwe-Debian.
3 Ukufakwa kwe-KDE
4 Amaphakeji angeziwe.
4.1 Amaphakheji Ahlobene Nomsindo / Ividiyo
4.2 Amaphakeji ahlobene nokusetshenziswa kwesistimu:
4.3 Amaphakeji ahlobene ne-Graphics and Images:
4.4 NO / KDE izicelo engizisebenzisayo:
4.5 Amaphakeji ahlobene ne-Intanethi:
4.6 Amaphakeji engiwasusayo:
5 Yenza ngokwezifiso i-KDE
5.1 Yenza kusebenze i-Akonadi + Nepomuk:
6 Ukuqeda imiphumela.
7 Ukubonisa kahle izinhlelo zokusebenza ze-Gtk
8 Isusa izinqubo ekuqaleni.
9 Isusa isikhombisi esinwebekayo.
10 Ideski elijwayelekile.
Ngokuphathelene nokufakwa kukhona okuhlukile. Imvamisa ngisebenzisa Ukuhlolwa kwe-Debian futhi into enengqondo kunazo zonke ukuthi Ngilande iso le- lesi sixhumanisi futhi ngalokho usuqedile ukufaka.
Ukufaka, kungaba nge-iso de Cwilisa o Wheezy, kufana ncamashi nendlela engichaza ngayo kule pdf, ngaphandle kokuthi angifaki Imvelo yezithombe, kepha kuphela Izinsiza Ezijwayelekile Zesistimu. Ngalesi siqondisi ngizocabanga ukuthi ukufakwa kwenziwa kusuka esweni le- Testing.
Lapho sesiqedile ukufaka ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza, singena ngemvume njengezimpande bese silungisa amakhosombe:
kufayela lemithombo esiyibekile:
Lapho usuqedile, sibuyekeza amaphakheji asevele efakiwe:
Lapho le nqubo isiqediwe, uma konke kuhambe kahle, siqala kabusha ifayela le- PC bese siyaqhubeka nokufaka KDE.
Kulo mhlahlandlela sizofaka kuphela amaphakheji adingekayo ukuze KDE iboniswa kahle futhi ikwazi ukuyisebenzisa. Sizofaka futhi amaphakheji afanele angafakwanga ngokuzenzakalela. Lapho nje singena ngemvume njengezimpande, sizoba nemvelo esebenza ngokugcwele ngokufaka amaphakheji alandelayo:
Ngalokhu kwanele ukuze kuthi lapho isiqedile bese siqala kabusha, singangena kudeskithophu yethu entsha sha. Njengoba ngisebenzisa i-Intel, ngivele ngingeze: xserver-xorg-ividiyo-intel, ngale ndlela:
Lokhu kwanele, kepha singafaka amanye amaphakheji ahlobene nokubukeka kwe- I-KDE:
Angamaphakheji esizothuthukisa ngawo izinhlelo IGtk esizisebenzisayo nezinye izithonjana esizingezayo. Uma ungasebenzisi isikhwama semali KDE ukuphatha amaphasiwedi, ungasusa kwalletmanager.
Ngaphambi kokuqala kabusha, kungakuhle ukufaka amanye amaphakheji esingawadinga, ngokwesibonelo:
Amaphakheji Ahlobene Nomsindo / Ividiyo
Amaphakeji ahlobene nokusetshenziswa kwesistimu:
Amaphakeji ahlobene ne-Graphics and Images:
NO / KDE izicelo engizisebenzisayo:
Amaphakeji ahlobene ne-Intanethi:
Vele kufanele ungeze noma ususe okudingayo 😀
Yenza ngokwezifiso i-KDE
Uma sidlula izinyathelo zangaphambilini ngaphandle kwezinkinga, sifika engxenyeni ethakazelisa kakhulu yayo yonke le nto: ukwenza ngezifiso KDE ukusisindisa abambalwa Mb yokusetshenziswa. Okokuqala sizokwenza ngesandla (by ikhonsoli) ukuqhubekela phambili ngokuhamba kwesikhathi ezicini ezicacile.
Yenza kusebenze i-Akonadi + Nepomuk:
Ngeke ngingene emininingwaneni yokuthi iyini Akonadi o I-Nepomuk, ikakhulukazi ngoba kunendatshana enhle kakhulu echaza kahle kakhulu ukuthi umsebenzi wabo ngamunye uyini. Ungayifunda lapha. Ukwenza kungasebenzi Akonadi ngokuphelele, senza okulandelayo:
futhi sikubeka kwaba yiqiniso:
Gcina wazi ukuthi izinhlelo zokusebenza zithanda I-Kmail basebenzisa Akonadi, ngakho-ke kungenzeka singakwazi ukuzisebenzisa. Ukwenza kungasebenzi I-Nepomuk hlela ifayela:
Ngokomqondo konke lokhu kungenziwa ngu Okuncamelayo kwe- Uhlelo, kodwa lutho, lapha kushesha 😀
Singonga izinsizakusebenza ngokuqeda imiphumela (okusobala, ushintsho) lokho kungena KDE ngephutha. Ngalokhu sivula ifayili le- Umphathi Wezintandokazi Zesistimu » Ukubukeka nokuziphatha kwendawo yokusebenza »Imiphumela yedeskithophu futhi ungahloli » Nika amandla imiphumela yedeskithophu.
Futhi singasusa eminye imiphumela ngokusetha izilungiselelo zomoya-mpilo. Ngalokhu siyacindezela I-Alt + F2 futhi siyabhala izilungiselelo zomoya-mpilo. Kufanele sithole into enjengale:
Lapho singazijabulisa ngokususa imiphumela yezinhlobo ezahlukahlukene. Ngimane ngihlole: Yenza kusebenze ukugqwayiza.
Ukubonisa kahle izinhlelo zokusebenza ze-Gtk
Into yokuqala esiyenzayo ukufaka ama-motors IGtk kuyadingeka uma singakwenzanga ngaphambili:
Ilungile, lapho sivula noma yiluphi uhlelo lokusebenza I-GTK njengoba Firefox, I-Pidgin o I-Gimp kufanele iboniswe ngaphandle kwezinkinga.
Isusa izinqubo ekuqaleni.
Sivula ifayela le- Umphathi Wezintandokazi Zesistimu »Ukuphathwa Kwesistimu» Ukuqalisa Nokucima »Umphathi Wensiza bese ususe ukumaka lezo esingafuni ukuziqala. Isibonelo sinye engihlala ngisikhubaza: Amamojula wokusesha we-Nepomuk.
Isusa isikhombisi esinwebekayo.
Noma kungahle kungabonakali njengokufana, ukweqa okuncane kwesithonjana okuvela kusikhombisi lapho sivula uhlelo lokusebenza kudla izinsiza. Ukuyiqeda sivula ifayela le- Umphathi Wezintandokazi Zesistimu »Ukubonakala okuvamile nokuziphatha» Izaziso zohlelo lokusebenza nezesistimu »Isaziso sokuqalisa futhi ithi kuphi Isikhombisi esinwebekayo sibeka: Asikho isikhombisi esimatasa.
Bengihlala ngithanda ukuba nedeski lendabuko, njengaku I-Gnome o KDE 3. Ngalokhu siya kudeskithophu bese sichofoza isithonjana engxenyeni engaphezulu kwesokudla bese siyakhetha Okuncamelayo kokubuka ifolda:
Futhi ewindini eliphuma sishintsha isimo sibe Ukubuka kwefolda.
Silungile, ngalokhu sikwenzile manje 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » I-Debian Wheezy + KDE 4.8.x: Ukufaka nokwenza ngezifiso
Sawubona ngiyabonga ngokuthunyelwe kwakho.
Ngimusha ku-linux futhi ngicabanga ukuthi ngine-GNOME ngingathanda ukwazi ukuthi ungayenza kanjani ngokwezifiso. shintsha imibala uye emafasiteleni. Ngibona konke okumpunga
Futhi, njengoba ngenzela umdlali weFEDORA 17, ngiyazi ukuthi kuningi, ungashintsha noma ulungiselele i-surrond engicabanga ukuthi ibhalwe kanjena. Ngisho ukuthi umsindo ubucayi futhi awubukhali. kumawindi media player ungakwenza lokho. futhi lawo mawindi angajwayelekile 7
futhi ekugcineni ukuvalelisa amawindi 7 kufana nokufaka izinhlelo zamawindows 7 ku-linux. Basho lokho ngewayini kepha futhi bathi kunika izinkinga. ngenye indlela?
Ngisebenzisa uhlelo lwe-accounting futhi olukhawulela ukufuduka kwami ​​ku-linux,
Angikwazi ukusebenzisa noma yiluphi uhlelo olune .ex kulo. njll ku-linux.
Yini laburito !! Ngiphinde ngisebenzise i-Debian Testing ngokufaka "kusuka ekuqaleni" kepha nge-Awesome njengomphathi wamawindi, iqiniso ukuthi kukhululeke kakhulu ukusebenza nalo mphathi wewindi. Ngakolunye uhlangothi, bengihlala ngithanda ukuthi i-KDE ibukeka kanjani kodwa angikaze ngiyisebenzise: -S ngoba kubonakala kimi ukuthi i-KDE ifuna izinsizakusebenza eziningi, kepha kuzofanela ngiyizame ngolunye usuku ...
Akusasindi kangako, futhi ngokulandela izinyathelo ezichazwa u-Elav kule ndatshana, ungayisebenzisa ngokuphelele nasemshinini one-512 MB ye-RAM.
Empeleni, ngiphuthelwa izinto eziningi zokuzisebenzisa .. Ekugcineni ku-KDE Netbook ngivuka ne-150MB ye-RAM neFirefox, iThunderbird, iPidgin, iKonsole nezinye izinhlelo ezivulekile ezisebenza ngemuva, ayidluli ku-450MB .
Akunakwenza ngalutho, ungaba nama-desktops amane nezinkinga ezingama-zero ezithatha insiza eningi kakhulu.Ngifake izinhlobo eziningi futhi ngiyi-newbie futhi ngithanda ongakwazi ukukwenza nge-azulin.
Sengizothuthela ku-linux ngenza izivivinyo ezimbalwa futhi uma ngivalelisa i-azulin de w.
Ngemuva kokuhlola i-OpenSUSE nokusebenza kwayo okuhle, bengifuna ukuzama i-KDE ku-Debian ngenhlanhla esesikhathini segatsha lokuhlola. Ngiphinde ngicacise ukuthi ngeSonto eledlule, ngoSepthemba 9, i-beta 2 ye- [url = http: //cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta2/i386/iso-cd/] Wheezy [/ url] ikhishiwe. Okungacaci kimi u-Elav kungenxa yokuthi usebenzisa lokho kwakha okuthile hhayi i-netinstall noma i-debian-testing-i386-kde-CD-1 yakamuva. Qaphela, nami ngikwenza lokhu lapho ngifaka iDebian ukuze ngingalayishi "udoti" ongaka kodwa kulabo abafuna ukufaka inguqulo ye-KDE kuzoba khona umehluko omkhulu ekusetshenzisweni kwemithombo?
Kubukeka kukuhle impela, kungenza ngifune nokuzama. Mhlawumbe ngemuva kokuqeda amaphrojekthi ambalwa ngakho-ke angikwazi ukuyekethisa i-laptop yami okwamanje. Ngibonga umhlahlandlela.
Ungasishicilela isithombe sohlelo lwe-GTK ku-KDE? Angikaze ngisebenzise i-KDE futhi ngithanda ukubona ukuthi kubukeka kanjani, njengoba ngithanda kakhulu ukuklanywa. Esikhundleni salokho, izinhlelo zokusebenza ze-Qt ku-XFCE zihlanganiswe ngaphandle komthungo.
Hhayi-ke, mhlawumbe lokhu kuzokusiza, kunjalo, ukubukeka kuncike kakhulu kwisitayela osisebenzisayo noma osabekayo:
Ngemuva kokuhlola i-OpenSUSE nokusebenza kwayo okuhle, bengifuna ukuzama i-KDE ku-Debian ngenhlanhla esesikhathini segatsha lokuhlola. Ngiphinde ngicacise ukuthi ngeSonto eledlule, ngoSepthemba 9, i-beta 2 ye Wheyy yaphuma. Okungacaci kimi u-Elav kungenxa yokuthi usebenzisa lokho kwakha okuthile hhayi i-netinstall noma i-debian-testing-i386-kde-CD-1 yakamuva. Qaphela, nami ngikwenza lokhu lapho ngifaka i-Debian ukuze ingalayishi "udoti" omningi kepha kulabo abafuna ukufaka inguqulo ye-KDE eyodwa, ngabe kuzoba khona umehluko omkhulu ekusetshenzisweni kwemithombo?
Inkinga ukuthi angikwazi ukulanda i-iso njalo ngemuva kokuphindwe kabili kathathu, ngoba ukuxhumana kwami ​​kwe-inthanethi akukuvumeli .. Ngakho-ke kufanele ngisebenzise lokho enginakho hand
Sekukonke, ilandwe malini ku-KDE SC kuphela?
Kulungile, kusebenza ngendlela efanayo ebengicabanga ukuthi uyisebenzisele isizathu esingu-x. Ozithobayo!
Kungenzeka kungabi nomehluko omkhulu maqondana nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza, kepha uma ulandela izinyathelo zikazakwethu u-Elav uzoba nohlelo oluhlanzeke kakhulu, ukusuka lapho kuzodingeka ufake lokho okudingayo kuphela. Inhloso yakho konke lokhu ukuba nohlelo olusebenzayo olunokudingeka ngokuqinile. Ekupheleni kosuku, yithina esakha isistimu yethu ngokuthanda komuntu ngamunye, futhi kungani kunezinhlelo zokusebenza esingaze sizisebenzise? =)
Ngokuqondile, umqondo ukuthi ube neDeski elingenalutho ukuze wonke umuntu abeke lokho akudingayo ...
I-tuto elav enhle kakhulu, kucace ukuthi akunakwenzeka. Ngeke ube neyodwa ngaphandle kweXFCE?
Kubonakala kimi ukuthi uma ngithumele okwanele kwe-Xfce tidbits, noma kunjalo, bona ukuthi ungakuthola yini okufunayo lapha.
Ibhukwana elihle kakhulu @elav elihle futhi elifushane, njengamanje ngisebenzisa i-Arch, kepha ngifuna ngempela ukuhlola i-Debian nge-KDE, ngifisa ukwazi ukuthi i-KDE ikhuluma kahle kangakanani emshinini wenqama we-1GB nokuthi ngikwazi yini ukusuka esitebeleni ngiye ekuhlolweni ngoba nginakho kuphela isithombe esisodwa esitebeleni seDebian futhi ukuxhumana kwami ​​kuhamba kancane ukulanda esinye.
Umuhle, akunakwenzeka ukukwenza kube lula, umnikelo muhle kakhulu.
i-elav enkulu ngiyabonga
Sanibonani nonke, nginibhalela okokuqala ngqa, ngimusha ku-desdelinux.
Ngisebenzisa i-gnulinux kusukela ku-mandrake emuva ku-98, bengihlala ngithanda isoftware yamahhala, ngikwazile ukuthenga i-macbook pro 13 enemininingwane elandelayo:
I-Intel core i5, 8gb ddr3 1600 SSD hard disk 256gb integrated videocard Intel HD 4000 512MB and I have 15 days trying to install debian from 8gb usb memory and I have not successful, the only one I have been able to install is ubuntu 12.04 I Ngilande ama-distros a-6 ahlukile futhi angikwazi ukuwafaka kwimemori ye-USB, inkinga ukuthi inginika iphutha futhi iyathosa, nge-Ubuntu iqala ngaphandle kwezinkinga, empeleni sengivele ngiyikhiphile. Ngidinga usizo lwakho ngicela, ngifuna iDebian ene-KDE okuyidesktop yami engiyithandayo.
Ngibonga kakhulu kusengaphambili futhi ngiyabonga ngokudala le ndawo ukuveza ukungabaza kwethu.
Muva nje, kwi-netbook ye-Acer, ngifakile, kusuka ku-USB Debian Testing + KDE 4.8 ngaphandle kwenkinga. Ngemininingwane oyinikezayo, kunzima ukwazi ukuthi kwenzekani kuwe; kimi, isithombe se-iso sidluliselwe ku-USB nge- "cat debian.iso> / dev / sdb", lapho i-sdb kwakuyidivayisi ye-USB
Noma kunjalo, kungani ungazami ukuyifaka usebenzisa iCD / DVD?
Uthenga iMacbook okuthi, ngenxa yemininingwane yayo, kumele ikubize kathathu leyo ye-PC enezici ezifanayo… futhi usebenzisa iWindows (ngokuya nge-useragent yakho) noma ubhala usebenzisa enye ikhompyutha?
Yisiphi isoftware oyisebenzisayo ukwenza i-USB ibhuthwe?
Ngakolunye uhlangothi, bekubonakala kimi ukuthi ngifunde kungekudala nje ukuthi ama-Mac anikeze ubunzima obengeziwe lapho efaka kusuka ku-USB ... kepha ngilokhu ngizibuza ukuthi kungani ngichitha kathathu kwi-Mac? ngukuthi uma ufuna ukusebenzisa i-Linux angiqondi.
UJavi hyuga kusho
Umsebenzi omangalisayo elav. Kuleli hlobo bengilwa noDebian ne-KDE futhi ngidabukile ukuthi okuthunyelwe kuphelelwe yisikhathi. Manje, ngalesi sibuyekezo, ungenze ngafuna ukulwa ne-Debian futhi lol.
Ungahlanganyela indlela yakho yokwenza ubushelelezi befonti? Ikakhulukazi kuzicelo ze-GTK, ngoba ikakhulukazi kuFirefox naseLibreoffice zibukeke zimbi futhi izinto azizange zithuthuke ngize ngikopishe amanye amafayela ngqo kusuka kubuntu fontconfig. Uyazi yini indlela engcono?
Phendula uJavi Hyuga
Kulungile. Lapho usulungise yonke into, ngazise 😀
Kusuka ku-10! Manje kufanele ngiguqule izinto ezimbalwa ukuze ngikufinyelele engikuthandayo, kepha indlela yakho yokuhlanganiswa kwe-GTK yinhle. Ngiyakhumbula ukuthi ngigcine ukukwenza ngohlelo lwangaphandle, kepha kukhululeke kakhulu ngaleyo ndlela.
Ngiyabonga kakhulu ^^
Ngaphezu kwephakheji ye-gtk2-engines-oxygen, kukhona i-gtk3-engines-oxygen. Ngingayifaka ekufakweni kwephakeji ukuze izinhlelo ze-gtk3 nazo zihlanganiswe nemvelo ye-KDE.
Konke okunye, okokufundisa okuhle!
Ngiyabonga nonke ngokuphendula imibuzo yami, niwumphakathi omangalisayo, ikakhulukazi ngibonga u-Elav ngokungisiza ukufaka i-debian kwi-macbook pro, izimpendulo zakho zishesha kakhulu, qhubeka njalo futhi ngiyabonga ngokungamukela kahle.
Qhubeka nomsebenzi omuhle, uzoya kude kakhulu.
Ngiyabonga ngokusima kwakho ubeke amazwana .. Uzohlala wamukelekile 😀
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngolwazi lwakho!
Ukushintsha ukuhleleka kwemibono, ngiyazi ukuthi isihloko besivele sithintiwe ngaphezu kwesikhathi esisodwa (angikwazanga ukukuqonda); Ingabe iqiniso lokuthi ukuhlolwa lisemithonjeni yohlu kwenza ukusatshalaliswa kube ukukhishwa okuhamba kancane? Ingabe kukhona ushintsho uma lunama-wheezy?
Ngiyaluthokozela usizo lwakho kusengaphambili.
Kahle impela. Uma ufaka i-Wheezy, lapho iW Wheezy (ifanele ukudilizwa) manje Ukuhlolwa kuya ku-Stable, lapho-ke uzoyeka ukuthola izibuyekezo zamaphakeji amasha nezinto ezinjalo. Ngakho-ke, ukushiya emthonjeni wokuhlola, lapho uWheezy eya eSitebele, uzoqhubeka nokuthola amaphakheji we-Testing elandelayo nokunye .. Ngiyethemba angizange ngidideke nencazelo.
Isifundo esihle kakhulu, bengilokhu ngifaka le ndlela isikhathi eside futhi uhlelo lukhanya.
Ummm, umhlahlandlela omuhle kakhulu mngani!
Ngabe lezi zinyathelo ziyafana ngokufakwa okuhlanzekile kwe-Debian Stable?
Mngani VaryHeavy, ngithenge i-macbook ngamadola ayi-1,100 amasha ebhokisini layo, ngiyivule ngokwami, futhi benginediski engu-256gb ssd disk engasetshenziswanga endlini yami ngathenga ama-8gb enqama 1600. I-dell xps laptop ayibizi amadola ayi-1100 ngemininingwane ukuthi ngifaka ama-macbook kubiza kakhulu.
Ngibhale ngisuka kwikhompyutha ngisemsebenzini efakwe amawindi.
Ngakolunye uhlangothi, ngikwazile ukufaka ubuntu kwi-mac ngisebenzisa imemori ye-USB ngaphandle kwenkinga, isoftware ebengiyisebenzisa kumawindi ukwenza imemori boot ibiyi-unetbootin, kepha ayisebenzi ngakho ngisebenzise i-usb bukhoma i-LILI futhi isebenza kahle kakhulu, inkinga ukuthi i-debian, i-opensuse, i-kubuntu, i-fedora, i-slackware, i-archlinux, ayikho engisebenzelayo, i-ubuntu kuphela, ngakho-ke, ngisuse i-ssd disk kwi-macbook ngafaka i-superdrive emuva ukubona ukuthi ngiyakwazi yini ukufaka i-debian ngokusebenzisa i-cd futhi ngokwami ​​ngimangele, ngiqala ukufakwa kwe-Debian bese kuma ukufakwa kwe-grub futhi uma ngiyitshela ukuthi iqale ngaphandle kwe-grub futhi ngaphandle kwe-lilo, ihlala lapho futhi ekugcineni kufanele ngikuhoxise ukufakwa, nginezinsuku ezimbili kulokho bese uthumela ukuthenga ama-dvds woqobo uDebian, ngoba uma ngikwazi ukufaka iDebian kwi-macbook, ngizoyithengisa ngithenge i-dell xps eyi-2-intshi.
Uqinisile i-macbook inika izinkinga zokufaka kusuka ku-usb.
P.S. Ngisebenzisa i-mac esifundweni engisenzayo esibizwa nge-rosetta stone ngesiNgisi, banginikeze i-mac yingakho ngiyithenge ngentengo engcono kakhulu kunanoma yisiphi isitolo sama-apula emhlabeni.
Ngiyabonga futhi ngeke ngiliyeke, ngifuna uDebian yebo noma yebo.
Ozithobayo ovela eDominican Republic.
PD1. Thethelela amaphutha, ngibhala ngivela kwi-laptop endala kunendlala.
Sawubona ngifisa ukwazi ukuthi ngiyifaka kanjani iDebian "ukuthi emahoreni ambalwa edlule ngafaka i-Debian sonke isitayela kepha bengingenayo i-inthanethi futhi phakathi kwezinye izinto"
ngiyabonga kakhulu hehehe ngu-12: 03 ebusuku futhi ngiqedile ukufaka i-Debian Testing futhi njengamanje ngifaka i-KDE okusho ukuthi ngiseGNOME, ngilinde umfana ojabulayo ukuqeda ukufaka, kodwa okokufundisa okuhle kakhulu, ngiyabonga thanda uDebian ne-KDE nakakhulu! ngiyabonga
Wamukelekile mnumzane !! Ngiyethemba ukuthi iyakusebenzela futhi isebenza kahle 😀
Iposi elihle lokusebenzisa kahle i-KDE, uma kukhona owazi okuthile ngaphandle kokutshela 😉
Ngifuna ngempela ukufaka i-debian yami njengoba ukuhlolwa kuzinzile futhi kusebenza ngokwanele, kepha angikaze ngisebenzise i-KDE nge-debian futhi ingenza ngifune ngempela ukukuzama.
I-Squeeze yami iseyi-IRON, kusukela ngoFebhuwari 2011 ngibe nayo kakhulu noma ngaphansi, angikhumbuli kahle, kepha iqiniso ukuthi ngibona sengathi zonke izinsuku zingcono xD
Kodwa-ke, ngifuna ukushintshela kuWheezy kepha ngeke ngilinde kuze kwethulwe ngokusemthethweni ¬¬
Ngiyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kuzosebenza njengomhlahlandlela uma kwenzeka ngiba nezinkinga ngokufakwa, ngiyabonga ngomnikelo futhi ngiyethemba ukuthi nge-KDE iziphatha kanye ne-gnome2.6 noma i-fluxbox xD
i-master master elav ngilandele ulwazi lwakhe olujulile futhi ngafaka i-debian nge-kde, yize nginokungabaza kuphela (ngicabanga ukuthi uma ngingaphutha kukhona abanye laphaya) bokuthi ungafaka kanjani i-firefox
Faka le ndawo yokugcina:
i-deb http://ftp.fr.debian.org/debian main yokulinga
# apt-get ukufaka -i-iceweasel yokuhlola
Inkinga yami ukuthi sengivele ngafaka i-debian ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza, kunalokho ngilungiselele amakhosombe futhi avuselelwa kahle
Kepha akangivumeli ngingene edeskini ngathi:
# thola ukufaka kdm
# /etc/init.d/kdm qala
Lapho okunye okuthunyelwe kwalolu hlobo kuvuselelwa?!, Nge-KDE 4.10!
Sanibonani futhi ngiyabonga kakhulu!
Yebo, lapho le KDE 4.10 ku-Debian 😀
Nginakho engqondweni; P !!
Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho elav!
Siyabonga ngokuphawula ..
Izithombe ze-animated zamaphephadonga opopayi zingabekwa kanjani ku-KDE 4.10?
Lex Aleksandre kusho
I-artigo enhle kakhulu!
Phendula uLex Aleksandre
I-athikili enhle ongayicabangela uma uthanda i-KDE. Izintandokazi zami
Kunemininingwane eminingi futhi kuchazwe konke. Siyabonga ngokufaka!
Umbuzo owodwa nje, lapho uthi ukubhala i-repo yokuhlola i-debian emithonjeni yohlu, ingabe usho ukuthi ubuyisela okunye okukhona ngalolo oluhlolwayo noma ukulifaka kokukhona?
Ngifake i-wheezy futhi ama-repos avela njenge-wheezy, ngokunengqondo, futhi ngifikelwa ukungabaza ukuthi uma kuzinzile ngeke kube khona ukungqubuzana noma kuzoyeka ukubuyekeza iphakethe.
lapho ngifaka okulandelayo ... .. # aptitude install kde-plasma-desktop kde-l10n-es kwalletmanager .. I label disk .... from debian ... Ngiyenza lapho futhi ngiyenza ku ithanga elincane ..
Sawubona ... ngisanda kufaka i-debian 7 nge-kde futhi nginezinkinga ezithile ...
1. Lapho uhlelo lokusebenza luzama ukufaka, ukuvuselela noma ukususa okuthile, alungibuzi iphasiwedi yokugunyaza isenzo bese ngithola iwindi lokuthi ukuqinisekiswa akuphumelelanga ...
Okwesibili. Ngizamile ukufaka i-flash player ukuze ngikwazi ukubuka amavidiyo aku-inthanethi futhi angikwazi ukuwafaka ku-chromium noma ku-iceweasel ...
3 ° Nginqume ukufaka i-chrome ngandlela thile ukuxazulula inkinga yokungakwazi ukubona amavidiyo ... ngikwazile ukuyifaka ngokufanelekile nokulanda ifayili ekhasini, kepha lapho ngiyifuna ayiveli ndawo imenyu futhi lapho ngizama ukuqala nge-console ingitshela «umthetho olandelwayo awucacisiwe (google-chrome: 11553): gtk_warning **: ayikwazi ukuvula isibonisi: 😮
Ngibona kakhulu!! Kuhle kakhulu futhi kuyasiza !!
Isixhumanisi esiya ku-kdehispano siphukile, ungasebenzisa lokhu esikhundleni salokho:
Phendula ukuze ubeke amazwana
sawubona, ngizama ukufaka i-wifi, ngine-debian testing futhi lapho ngizama ukufaka i-network-manager-kde ingitshela okulandelayo:
Iphakheji yenethiwekhi-umphathi-kde ayitholakali, kepha ezinye izikhombisi zephakeji
E: Iphakheji "network-manager-kde" ayinayo ikhandidethi yokufakwa
Ngiyifuna kusuka ku-synaptic futhi ayitholi inethiwekhi-manager-kde noma, kuphela umphathi wenethiwekhi nomphathi wenethiwekhi-umphathi-gnome okhona
Yini engingayenza ???
Ngizamile ukuhlola iMusix 3.0 ebukhoma (isuselwa kule Debian 7 efanayo) futhi kuvela ukuthi ngemuva kokushiya eminye imigqa engenalutho, i-KDM ayiveli, kepha uma ngingena kwimodi yombhalo bese ngifaka i-startx noma i-xinit uma iqala iXorg (engicabanga ukuthi akuyona inkinga ngomshayeli uqobo lwayo) ingaba kuphi inkinga?
Lapho ngiqala i-musix ku-Virtual Box kuvela ukuthi i-buffer yohlaka iphuma kahle kodwa hhayi lapho ngiqala emshinini wangempela ukuthi wonke umbhalo omkhulu ngaphandle kwepenguin ngakwesobunxele uyaphuma igrafu yami yile
00: 02.0 Isilawuli esihambisanayo se-VGA: I-Intel Corporation Mobile GM965 / GL960 Integrated Graphics Controller (eyinhloko) (rev 03)
UReynaldo Polanco kusho
Le nqubo ifana ne-AMD, kungani ngibona ukuthi une-Intel ??, ngibuza ngoba ngifuna ukususa iGnome eletha i-debian yami bese ngifaka i-KDE kuyo kusukela phambilini ngazama ukufaka iCinnamon nokulimaza i-OS yami.
Ngiyethemba ungangisiza ngalowo mbuzo omncane, ngiyabonga.
Phendula uReynaldo Polanco
Ngimusha ku-Debian naku-KDE, kepha njengoba kufanele ngizame futhi ilukuluku lokwazi lenza ikati lihlakaniphe (ngiyalibulala) ngakho-ke ngilifakile ngenxa yeseluleko sakho. Kepha nginezinkinga ezithile futhi kungazelelwe ukuthi uhlelo lubhalwe uphawu. Ngibonile ukuthi yiKDE ebhalwe amalebula kepha angiyinikezi incazelo ngale nto.
Lokhu kungabangelwa yini?
Abangane, usizo, ngifake i-debian kepha iqala kusuka ku-tty, ngilandele izinyathelo eziphakanyiswe lapha, kepha ngesikhathi sokuvuselelwa ingicela ukufaka idiski, kepha ngiyifakile kusuka ku-usb futhi ayiyiboni wenzani? noma okungcono, ngingaqala kanjani isikhombimsebenzisi sokuqhafaza?
I-LDD: I-Qubes OS ukusabalalisa okuqondiswe kwezokuphepha